किन बलियो छ यातायात सिन्डिकेट ? « प्रशासन
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारी कदम अगाडि बढेको देखिन्छ तर किन बलियो छ सिन्डिकेट ? हेर्नुहोस् बुँदागत रूपमा
३.सिन्डिकेटको दादागिरी, समय र भाडा मनपरी
४.सिन्डिकेट तोड्ने कानुन २५ वर्षअघि नै पारित
५.सडक सरकारको, कब्जा व्यापारीको
६.सिन्डिकेट एक्लै छैन नेताको आशीर्वाद छ
देशभर चार सय समिति छन् । यस्ता समितिले सवारीसाधनका मालिकसँग १२ लाखसम्म शुल्क लिएर सिन्डिकेटमा समाहित गराउँछन् । ती सबै समितिको नेतृत्व गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले राजनीतिक नेतृत्वसँग सोझो पहुँच राख्दै आएको छ । जसको बदलामा दल र नेताले व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा चन्दा लिने, सभा–सम्मेलनमा व्यवसायीका निःशुल्क बसको प्रयोग गर्ने र चुनावमा खर्च उठाउने गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।